शुक्र र वृहस्पति ‘अस्त’मा किन गरिँदैन नयाँ धार्मिक शुभकार्य,उदय-अस्त कसरी? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: १३ कार्तिक २०७५, मंगलवार October 30, 2018
काठमाडौं । सनातन धर्ममा विशेषगरी वृहस्पति र शुक्र ग्रह अस्त भएका वेला मांगलिक कार्यहरू गरिँदैनन्। अहिले अँगालिएको ज्योतिषशास्त्र र त्यसैका आधारमा बनाइएको निर्णयसिन्धुलगायतमा यी दुई ग्रह अस्त भएका नित्यकार्यबाहेक नैमित्तिक कार्य गर्न नहुने बताइएको छ। मुहूर्तचिन्तामणिलगायत ज्योतिष ग्रन्थका अनुसार शुक्र र वृहस्पति ग्रह अस्त हुनुभन्दा केही दिन अघि वृद्ध हुने र उदयपछिका केही दिन बालक हुने हुनाले अघिपछिका तीन तीन दिन पनि शुभकार्यहरू नगरिने नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिका अध्यक्ष डा‍. रामचन्द्र गौतम बताउँछन्।
नित्य अर्थात् दैनिक सन्ध्या, पूजाआजा आदि। बर्सेनि निश्चित समयमा पर्ने चाडपर्व, श्राद्ध आदि। नैमित्तिक अर्थात् नयाँ गृह निर्माण आरम्भ, नवगृह प्रवेश, नयाँ व्रतको आरम्भ, विजययात्रा, नयाँ मन्दिर निर्माण, सप्ताह, नवाह आदि अनुष्ठान र व्रतबन्ध–विवाह आदि संस्कारहरू। ‘अत्यावश्यक मानिने जन्म, मृत्यु आदि संस्कार भने गर्न हुन्छ’, गौतम भन्छन्, ‘वृहस्पति र शुक्र अस्त हुँदा पनि नित्य कर्म रोकिँदैनन्। नैमित्तिक कर्म गरिँदैनन्।’ मूल वैदिक परम्परामा भने ग्रह अस्तका वेला शुभकर्म गर्न नहुने भन्ने विधान नभएको वैदिक पात्रोका निर्माणकर्ता प्रमोदवर्धन कौण्डिन्न्यायन बताउँछन्। उनका अनुसार वेद, श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्रका साथै वेदांग ज्योतिषमा यो बेला गर्न हुने र नहुने विषय उल्लेख छैन।
ज्योतिषशास्त्र अनुसार ग्रहहरू आफ्नो चलायमान गतिको क्रममा विभिन्न समय उदय अस्त हुने गर्दछन्। सूर्यको नजिक पर्दा ग्रह अस्त हुन्छन् भने सूर्यबाट टाढा हुँदा ‘उदय’ हुन्छन्। अर्को अर्थमा क्षितिजमा नदेखिने ग्रहलाई ‘अस्त’ भएको भनिन्छ। शुक्र र बृहस्पति क्रमशः दानव र देवताका गुरु भएको हुनाले यी ग्रह अस्त भएको बेला काम्यकर्म (कामना राखेर गरिने कार्य) गर्न वर्जित हुने बताइन्छ। सूर्यसँग लगभग १० अंश फरकमा परे भने शुक्र अस्त हुन्छ। सूर्यको ११ अंश वरपर रहँदा बृहस्पति ग्रह अस्त हुन्छ।
अहिले शुक्र अस्त
शुक्र असोज ३१ गते पश्चिममा अस्त भएको थियो। यही कात्तिक १४ गते पूर्वमा उदय हुने पञ्चांगहरूले उल्लेख गरेका छन्।
कात्तिकमै वृहस्पति पनि
शुक्र उदय भएको १२ दिनपछि अर्थात् कात्तिक २६ वृहस्पति पश्चिममा अस्त हुँदैछ। मंसिर २१ गते पूर्वमा उदय हुने भएकाले यो महिनामा पर्नुपर्ने विवाह आदि मांगलिक कार्य प्रभावित हुनेछन्। मंसिरको अन्तिम एक दिन मात्र मुहूर्त्त रहेको पञ्चांगहरूले उल्लेख गरेका छन्।